Tosika natao ialana amin’ny fahantrana fa tsy natao hohanina hoy ny mpitantana ao amin’ny boriborintany fahaefatra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fanampiana ireo sahirana
Tosika natao ialana amin’ny fahantrana fa tsy natao hohanina hoy ny mpitantana ao amin’ny boriborintany fahaefatra
Raharinirina Lalaina il y a 8 jours
Resaka nifanaovana tamin-dRtoa Bodo Voahangy Ranalimalala lefitra faharoa ao amin’ny boriborintany faha efatra ao Antananarivo ny alatsinainy 7 jona tao amin’ny toeram-piasany teny Anosy, mikasika ny Ankohonana Miharina, fanampiana ara-bola avy amin’ny fitondram-panjakana ho an’ireo sahirana.
Ireo mpiara-miombon’antoka no mitantana ity fanampiana avy amin’ny Fanjakana ity, izany hoe ny Fid. Izy no nanao ny fanisana ary izy ireo ihany koa no misahana ny fizarana izany. Raha ny boriborintany faha efatra no asiana resaka dia misy Fokontany 14 hatreto no nahazo an’io tosika ara-bola io, izany hoe ny Ankohonana miharina dia dimy alina isam-bolana mandritra ny enimbolana. 5967 ny fitambaran’ireo nahazo ity fanampiana ao anatin’ny boriborintany faha efatra. Otiv sy ny Mvola, Orange Money, ary ny Airtel Money no miara-miasa amin’ny Fid amin’ny fanatontosana izao hetsika izao. Tamin’ny 28 mey lasa teo no nanombohana ny hetsika raha ny tao amin’ny Boriborintany faha efatra. Io no nanaovana ny andiany voalohany. Ny fangalana ny lisitr’ireo olona mahazo dia fiaraha-miasan’ny Fid sy ireo Agents communautaires any amin’ny Fokontany. Ny fanadihadiana manokana no natao tamin’izany, nahafahana nisafidy ireo ankohonana tena sahirana. « Mandrindra amin’ny ankapobe, ho an’ireo Fokontany izay misitraka no andraikitry ny boriborintany » araka ny nambaran-dRtoa Bodo Voahangy Ranalimalala lefitra faharoa ao amin’ny boriborintany faha efatra. Ny Fid mivantana no nikarakara izao hetsika izao mba ialana amin’ny romoromo, misy ny mahazo manko ary misy ihany koa no tsy mahazo. Ny sasany aza nahazo tamin’ireo fanampiana taloha nefa tsy nahazo tamin’izao hetsika vaovao izao.
Marihina fa io vola io dia tsy natao ho hampiasaina amin’ny fiainana andavanandro, izay no maha hoe miharina azy, izany hoe misy zavatra tokony hataon’ireo misitraka mba hampiasana ny vola fa tsy hohanina ampandehanana ny fiainana andavanandro izy io. Ohatra, fikambanana manao asa tanana. Misy ny fanaraha-maso ny vola rehefa nomena an’ireo nisitraka.
Ilaina ny fanampiana tahaka izao ahafahan’ireo sahirana miady amin’ny fiainana, izany hoe ialana amin’ny fahantrana. Miteraka fiankinan-doha raha miandry tolorana lava, no sady tsy mampivoatra. Izany no antony hanampiana ny sahirana mba tsy ho vesatry ny Firenena, fa tokony hampandroso ny Firenena raha ny tena marina, fa na izany aza be loatra ny elanelana eo amin’ny manana sy ny mahantra ka mananosarotra ny fanarenana no sady betsaka ihany koa ireo Malagasy no ory hava-manana ka tsy mahazaka ny fisondrotan’ny hafa, mila fiheverana izany.
RSE : Le Village Orange de Masindray fait peau neuve - il y a 2 jours
Assainissement : Signature d'une convention entre WaterAid et Osceah pour tenter d'améliorer la situation - il y a 4 jours